Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Tsy misy maherifo tavela amin'ity Andro fizahan-tany eran-tany 2021 ity
Fizahan-tany azo idirana • Birao fizahantany afrikanina • Associations News • Awards • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • fanabeazana • Vaovaom-panjakana • Vaovao farany momba ny Hawaii • Vaovao momba ny fahasalamana • ICTP • Interviews • Vaovao • People • Fanambarana ho an'ny mpanao gazety • fanorenana • tompon'andraikitra • News sustainability • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • WTN
Vao 18 volana monja ny tambajotran'izao tontolo izao momba ny fizahantany fa misy ny mpitondra vaovao misongadina amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahan-tany.
Maro amin'izy ireo no fantatra fa maherifon'ny fizahantany amin'ny alàlan'ny World Tourism Network - fa iza kosa izy ireo?
The Tambajotra fizahan-tany manerantany (WTN) dia manana mpikambana ao amin'ny firenena 128 ary nipoitra avy tamin'ny fananganana.travel fifanakalozan-kevitra.Heroes.travel no fandaharana mari-pankasitrahana sy fankatoavana maimaim-poana avy amin'ny WTN manome voninahitra ireo izay nanisy fiovana.
Araka ny UNWTO, ity Andro fizahan-tany eran-tany 2021 ity dia momba ny fampidirana ao amin'ny fizahantany. Manome toky ny WTN fa ao anatin'izany ireo mahery fo rehetra tsy manana anarana.
Ny tena mahery fo dia ireo izay tsy nanana orinasa nandritra ny areti-mandringana ary mbola mino ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany. Ity vondrona tsy fantatra ity dia nomena ny Loka mahery fo momba ny fizahantany manana fizahan-tany. avy amin'ny World Tourism Network androany.
”Ireo tena mahery fo ato am-poko tsy misy asa mandritra ny 18 volana ary tafavoaka velona.
Na dia tsy hita maso aza izy ireo dia eo amintsika ireo, saingy mety tsy manana feo. Tiako izy ireo hihaino antsika, handroso, mba hahafahantsika mankasitraka azy ireo amin'ny fahavelomany sy hanohy ho tafavoaka velona, ​​ary ho anisan'ny orinasantsika lehibe. Ny Andro Iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany 2021 dia mikasika ny fampidirana ho mpikambana, ary tsy maintsy ampidirina io vondrona io. ” hoy i Marikar Donato, mpiara-mandrindra ny hetsika Andro maneran-tany fizahan-tany ho an'ny WTN ary maherifon'ny fizahantany ny tenany.
Nanampy izy hoe: “An'arivony ireo mahery fo tsy fantatra momba ny fizahantany.”
Nanampy ny mpanorina sy filohan'ny tambajotran'izao tontolo izao momba ny fizahantany: Tena reharehako ny amin'i Marikar hanatratra ny loka Anemy mpizahan-tany momba ny fizahan-tany, voalohany eto amin'ity tontolo ity.
Maika, fantatsika ireo mahery fo tsy fantatra ireo. Ther na aiza na aiza.
Indraindray fantatsika hoe iza ireo mahery fo ireo. Nisy toe-javatra tsy tianay hotondroina ho mahery fo ny olona. Nahatsapa izay tsy tokony hozaraina amin'ny besinimaro izy ireo.
Faly aho manambara, ny Tambajotra fizahan-tany manerantany no fikambanana fizahan-tany eran-tany voalohany mahatsapa fa ilaina ny mametraka ireo mahery fo tsy fantatra ireo ho lohalaharana.
The loka mahery fo momba ny fizahantany tsy fantatra anarana dia nampiana tamin'ny fomba ofisialy ny mahery fo.travel ny portfolio.
Ny mpikatroka WTN Dr. Peter Tarlow dia niaiky ary nilaza hoe:
“Ny fizahan-tany dia olona an'arivony izay mamorona tsy misy fitiavan-tena eo amin'ny tsirairay, ny kolontsaina ary ny firenena.
Ireto kintana fizahan-tany ireto dia maherifo tsy fantatra amin'ny indostria izay mitondra hazavana amin'izao tontolo izao tototry ny haizina.
Ny World Tourism Network dia mikasa ny hitondra ireo maherifo fizahan-tany ireo amin'ny mazava. Araka ny nolazain'i Dr. Peter Tarlow, mpiara-miasa amin'ny World Tourism Network: "Ny fizahan-tany dia mihoatra ny indostria fotsiny, fitambaran'ny pragmatika amin'ny ara-panahy, ny fifandraisan'ny fanahy amin'izao zava-misy eto an-tany izao.
Ireo maherifo amin'ny fizahantany dia ireo izay mampivondrona ny etika amin'ny fampiasa sy mampifangaro ny maha-olombelona antsika amin'ny tontolon'ny dia "Mampahatsiahy antsika i Tarlow fa ny maherifon'ny fizahantany dia misolo tena ny tsara indrindra amintsika rehetra ary ny fianarana momba ny tsirairay dia fitsangatsanganana amin'ny halalin'ny famoronana sy fiahiana. ”
Marikar Donato dia Washington DC Tour Guide ary mpanatanteraka eto amin'izao tontolo izao Fikambanan'ny Fikambananan'ny mpizahatany (WFTGA)
Androany dia nankalaza ireo maherifo fanta-daza ihany koa ny World Tourism Network. Ny mahery fo rehetra eken'ny WTN dia nanao zavatra mihoatra ny azo antenaina handalo ny pendem COVID-19.
Dr. Taleb Rifai, Sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha naharitra roa taona no niarahaba ireo mahery fo avy tao an-tranony tany Jordania. Hero Hero fizahantany Mary Rhodes, Ny filohan'ny Fikambanan'ny Hotel & Restaurant Guam dia nifoha tamin'ny 4 ora maraina mba hanatrika ity hetsika famolavolana iraisam-pirenena ity miaraka amin'ireo mahery fo isaky ny kaontinanta.
Dr. Walter Mzembi, Ny minisitry ny fizahantany teo aloha avy any Zimbabwe dia nampitandrina fa nakatona ity tontolo ity, ary manimba ny fomba fiasa marolafy natolotry ny mpitarika fizahantany nandritra ny 20 taona.
Alain St. Ange, filohan'ny Birao fizahantany afrikanina, ary ny minisitry ny fizahantany teo aloha avy any Seychelles dia nanana hafatra firaisankina ho an'i Afrika.
Aleksandra Gardasevic Slavuljica ny talen'ny fizahan-tany ho an'ity firenena Balkan ity dia ao amin'ny WTN hatramin'ny voalohany. Natao maherifo amin'ny fizahantany izy tamin'ny anjara asany tamin'ny fampiraisana ny faritra Balkan. Nanohana azy i Klodiana Gorica, Maherifo momba ny fizahantany, Profesora feno iray ao amin'ny University of Tirana, Faculty of Economy, Albania.
Mihainoa Dr. Snežana Štetić dia manana niasa tao amin'ny fizahan-tany sy ny fanabeazana ho an'ny fizahan-tany nandritra ny 40 taona mahery ary izy no lohan'ny vondrona liana amin'ny fanabeazana, miampy ny mitarika ny vondrona Balkan avo lenta an'ny tambajotran'izao tontolo izao momba ny fizahantany.
Deepak Joshizaho, maherifon'ny fizahantany avy any Nepal, ary CEO taloha an'ny Birao fizahan-tany ao Nepal dia nanome ny heviny momba ny fisokafan'ny fizahan-tany ho an'ny faritra Himalaya.
Profesora Geoffrey Lipman avy amin'ny SunX sy ny Fiaraha-miombon'antoka iraisam-pirenena momba ny toetrandro sy fizahantany (ICTP) nampahatsiahy an'izao tontolo izao ny loza mitatao amin'ny fiovan'ny toetr'andro.
Maherifo momba ny fizahantany Mahamenatra Faouzou DEME avy any Senegal dia nizara ny hafatry ny fanantenana, fahatokisana ary fampaherezana amin'ny tontolon'ny fizahan-tany. Izy koa dia ambasadaoron'ny Birao Afrikanina momba ny fizahantany, ary mpanolotsaina teknikan'ny minisitry ny fizahan-tany sy ny fitaterana an'habakabaka any Senegal.
Maherifo momba ny fizahantany ary CEO an'ny Next Group LLC any Azerbaijan, Efsun Ahmadov, Baku, any Azerbaijan Nahatsiaro ho salama kokoa taorian'ny tranga COVID tsy miteraka.
Maherifo momba ny fizahantany Diana McIntyre-Pike nanome fanavaozana ny fiaraha-miasa vaovaony miaraka amin'ny maherifo momba ny fizahantany Edmund Bartlett, minisitry ny fizahantany any Jamaika. Mahery fo amin'ny fizahantany i Diana ary mpitarika amin'ny fizahantany any Jamaika.
Amaka Amatokwu-Ndekwu, Lagos, Nizeria no mpiara-manorina ny Fikambanan'ny Vehivavy Afrikana misahana ny fizahan-tany sy ny fitiavana mandray vahiny any Nizeria. Samy mipetraka any Etazonia sy Nizeria izy.
Ilay Maherifo momba ny fizahantany, Joseph Kafunda, dia filohan'ny Fikambanana misahana ny fizahan-tany misongadina sy mpikambana ao amin'ny World Tourism Network monina ao Namibia. Nanatevin-daharana avy any Botswana izy.
Dr. Peter Tarlow, mpiara-manorina ny World Tourism Network dia namarana ny hetsika tamin'ny vavaka finoana maro.
Tsy misy fiampangana na iza na iza hanendry na handray ny fankatoavana ny Maherifo amin'ny World Network Network. Mila fanendrena tsy miankina roa farafahakeliny handinihina amin'ity loka ity. Fampahalalana bebe kokoa momba www.heroes.travel